सहकारीलाई किन भन्ने गरिन्छ फाइनान्स ? (हेर्नुस् फाइनान्स र सहकारी बीचको फरक) | Nepal's No.1 Co-operative News Portal
Home सहकारी खबर [Coop News] सहकारीलाई किन भन्ने गरिन्छ फाइनान्स ? (हेर्नुस् फाइनान्स र सहकारी बीचको फरक)
मानिसहरुमा फाइनान्स कम्पनी र सहकारी संस्था एउटै हुन् भन्ने भ्रम रहेको छ । कतिपय सहकारीका कर्मचारीहरुले आफूहरु फाइनान्समा काम गर्ने भन्ने गरेको सुनिन्छ । यद्यपि, सहकारी संस्था र फाइनान्स कम्पनीहरु एउटै हैनन् । यीनीहरुको काम, कर्तव्य, अधिकार, उद्देश्य, नियामक निकाय लगायत धेरै पक्षहरु एकअर्कासँग फरक छन् ।
सहकारी संस्थाको नियमन